Liverpool ayaa seefta gashaday ka hor kulanka Premier League ee ay la ciyaarayaan Southampton isniinta.
Reds ayaa la ruxday dhaawacyo xilli ciyaareedkan, laakiin waxay dhawaan soo dhaweysay Thiago Alcantara, James Milner iyo Xherdan Shaqiri.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa la dhibtooneysay dhaawacyo ay qabeen ciyaartoy muhiim ah sida Virgil van Dijk, Thiago iyo Joe Gomez, laakiin labada maqane ayaa Jurgen Klopp ku sii hayn doona madax xanuun aan la cayimin. ayaa kooxdiisa siiyay bilow fiican markii uu badal ku soo galay kulankii Newcastle United ee 16-kii daqiiqo ee ugu dambeeyay.
Iyadoo Liverpool ay durbaba dhaawacan tahay, madax xanuun kale ayaa qabtay todobaad ka hor, Joel Matip wuxuu macsalaameeyay seddex isbuuc wuxuuna sii kordhiyay murugada tababaraha Jarmalka.
Halkan waxa aan ku eegaynaa xiddigaha Liverpool ee dhaawacmay iyo waqtiyada ay soo laaban karaan:
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Cameroon, oo dhaawac uga baxay kulankii ay la ciyaareen West Bromwich Albion, ayaa la filayaa inuu maqnaado muddo seddex isbuuc ah, taasoo la micno ah inuu diyaar u noqon doono kulanka Manchester United ee 17ka Janaayo.
Weeraryahankan oo ay Liveprool kala soo wareegtay kooxda Wolves intii lagu guda jiray xagaagii, ayaa waxa dhaawac ka soo gaadhay muruqa horaantii bishii Diseembar, laakiin haatan waxa uu u muuqdaa inuu ka soo kabsanayo muddadii saddexda bilood ahayd ee loo qabtay.
Reds ayaa dib u heli doonta weeraryahankeeda ciyaarta laba bilood gudahood.
Si la mid ah Jota, Kostas Tsimikas ayuu dhaawac ka soo gaadhay muruqa kulankii Midtjylland waxaana la filayaa inuu isla wakhtigaas soo laabto.
Daafaca Liverpool ayaa soo dhigay sawir uu ku tababaranayo baaskiil isagoo ka soo kabanaya qalliin jilibka ah.
Gomez ayaa qaliin looga sameeyay dhaawac muruqa ah intii uu tababarka la qaadanayay xulka qarankiisa waxana la sheegay in uu garoomada ka maqnaan doono inta ka dhiman xilli ciyaareedkan laakiin haatan waxa suurta gal ah in uu soo laabto ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Liverpool waxaa ka maqnaan doona Virgil van Dijk inta badan xilli ciyaareedkaan ka dib qalliin jilibka ah oo lagu sameeyay ka dib dhaawac muruqa ah oo soo gaaray kulankii Everton ee October.
Qalliin guuleystay kadib, wuxuu ku bilaabay tababar fudud, halkaasoo uu dhowaan tababar ku qaatay Clarence Seedorf, laakiin waxaa jira rajo in uu soo kaban doono xilli ciyaareedkan.
Ciyaarto uu Ole Gunnar Uu Bishan January Ka Dirayo kooxdiisa